The Honor V20 na-enweta ọhụrụ Ime Anwansi UI 2.1 melite | Gam akporosis
Na-asọpụrụ V20 na-enweta ihe nchịkọta ụgbọ mmiri na anwansi ọhụụ UI 2.1 Mmelite
Sọpụrụ na-amalite a mmelite ọhụrụ maka flagship Sọpụrụ V20 na ụfọdụ ọhụrụ atụmatụ na fixes. Nke a bụ Ime Anwansi UI 2.1 na, dị ka ụfọdụ na-atụ anya, ọ na-abịa na compiler Igbe. Otú ọ dị, GPU Turbo 3.0 ka na-efu.
Mmelite ahụ kwa na-edozi ụfọdụ akụkụ nke igwefoto ma na-egosipụta ihe ngosi ya iji belata mmetụ ụgha, dị ka a kọwara.
Huawei mara ọkwa na Ihe nchịkọta ụgbọ ọnwa gara aga na ebumnuche iji melite arụmọrụ, ịdị mma na nzaghachi nke ngwaọrụ. Ọ na - eweta mmamịrị na ngwa ma na - enyere ha aka ịsọ ọsọ. Ọ na - emekwa ka ọ dị mfe ịgba ọsọ ma kọwaa ya na usoro iwu gam akporo.
Honor V20, aka Ele 20
Onye na-edekọ igbe na-eme ka ọ dị mma site na 24%, nzaghachi site na 44% ma melite ọrụ nke ngwa ndị ọzọ site na 60%. N'aka nke ya, ọ dị ngwa karịa Ngwaọrụ Dalvik Virtual.
Kwa se, bụ teknụzụ ọkaibe nke ga-enye ike maka ngwaọrụ Huawei. Na nsọpụrụ V20 na Sọpụrụ Ime Anwansi 2 ga-enweta GPU Turbo 3.0 na Ime Anwansi UI 2.1, nke bụ nke a ka anyị na-ekwu maka ya, mana ọ pụta ìhè site na enweghị ya na ngwa ọhụụ ọhụrụ ahụ.
GPU Turbo 3.0 na-ewebata ọtụtụ ọganiihu ọhụụ, gụnyere ogo dị elu yana ịhazi onyonyo AI. Ike oriri ejirila 10% belata ma enwere egwuregwu XNUMX ugbu a na teknụzụ njikarịcha a, ma e jiri ya tụnyere isii mbụ.
Emepere Honor View 20 na Spain
N'aka nke ọzọ, Sọpụrụ tinyekwara ihe nkwado nke gam akporo Mee gam akporo iji melite nchekwa ngwaọrụ.. Mmelite ahụ nwere 362 MB. A na-emezi ya ugbu a na China, mana n'oge na-adịghị anya, ọ ga-agbasa n'ụwa niile na nsụgharị ya niile, dịka ndị ọrụ na-atụ anya ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Na-asọpụrụ V20 na-enweta ihe nchịkọta ụgbọ mmiri na anwansi ọhụụ UI 2.1 Mmelite
Egwuregwu Pokémon ọhụrụ maka smartphones na-abịa na 2020
Durango: Ala Ugbo bu ezigbo dinosaur MMO ohuru nke nwere otutu nnwere onwe ime ihe